Night Time Skincare Rituals you need to Follow Now
ညအိမ်​ခါနီးဆို အမြဲလုပ်​​ပေးဖို့ မ​မေ့နဲ့​နော်​ 🎀😴👌💤
Hello ... ချစ်​တို့​ရေ
တို့ရဲ့ အသားအရေအလှအပကို နေ့ဘက်တွေမှာပဲထိန်းသိမ်းရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ညဘက်အိပ်စက်တဲ့အချိန်မှာလည်း အသားအရေကို အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းနိုင်မှ လှပနုပျိုမှုကို အစဉ်အမြဲပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြိုးနဲ့ရှိုးက ဒီတစ်​ခါမှာ​တော့ အားလုံးအတွက်​ ညအိပ်ခါနီးတိုင်း ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့ အလှအပရေးရာနည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးလိုက် ပါတယ်ရှင်။ ဒီအချက်​​လေး​တွေက Skincare ​တွေ Makeup ​တွေသုံး​နေတာထက်​ကို ထိ​ရောက်​ပါတယ်​ ။ ဖြိုးနဲ့ရှိုးဆို အမြဲလိုလိုက်​နာလို့ ငယ်​တဲ့ရုပ်​​ပေါက်​​နေတာ​လေ 😝
မိတ်ကပ်တွေကို လုံးဝပြောင်အောင် ဖျက်ပါ။
ခေါင်းအုံးမြင့်မြင့် သုံးပြီး အိပ်ပါ။
၂လက်မကနေ ၄လက်မကြားအမြင့်ရှိတဲ့ခေါင်းအုံးနဲ့ အိပ်စက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက သွေးကြောတွေရဲ့ စီးဆင်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ မျက်ဝန်းအောက်က အရည်အိတ်ဖောင်းခြင်းနဲ့ မျက်ခွံမို့ခြင်းတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ hand cream လိမ်းပြီး အိပ်ပါ။
တစ်နေ့လုံး နေပူဒဏ်နဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေကြောင့် ခြောက်ကပ်နေတဲ့ သင့်လက်တွေကို ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ hand cream လိမ်းပေးပါ။ ဒီလို လိမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် လက်အသားအရေကို ဖြူဝင်းစိုပြေစေပြီး လက်သည်းကိုလည်း အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်​ကိုယ်​လုံးလိမ်းလဲရတယ်​​နော်​ 😘
အိပ်ချိန် ၈နာရီခန့် အိပ်စက်အနားယူပါ။
Eye cream သုံးပြီးမှ အိပ်ပါ။
ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ eye cream သုံးပေးခြင်းက မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက် အရေးအကြောင်းဖြစ်ခြင်း၊ မျက်ကွင်းညိုခြင်း၊ မျက်အိတ် ဖောင်းခြင်းတွေကို ကင်းဝေးစေနိုင်ပါတယ်။ ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပြီး မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်က အသားအရေကိုလည်း လှပဖြူဝင်းစေပါတယ်။ eye cream မရှိရင်​ သျှား​စောင်းလက်​ပက်​ Gel ​လေးကို နဲနဲသုတ်​အိပ်​ပါ။
အို​ခေ ဒီအချက်​​လေး ၇ ချက်ကို အမြဲတ​စေ ဂရုတစိုက်​နဲ့ လိုက်​မယ်​ဆိုရင်​ အသား​ရေပြသနာ​တွေကို ၁၀၀% ကာကွယ်​နိုင်​မှာပါရှင့်​ ။ ကာကွယ်​ခြင်းက ကုသခြင်းထက်​ ထိ​ရောက်​တယ်​ဆိုတာ မ​မေ့ပါနဲ့​နော်​.
​နောက်​​နေ့လဲ မိန်းက​လေးတိုင်း သိသင့်​တဲ့ အလှအပထိန်းသိမ်းနည်း​လေး​တွေ ​ပြော​ပေးသွားမယ်​​နော်​.
Labels: Night Time Skin Care Phyopapablogs Skin Care Skincare tips